ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲ
Posted by phone_kyaw on May 3, 2012 in Copy/Paste | 17 comments
မိန်းမတွေရဲ့ နှလုံးသားက ကိုယ်တော်ချောတွေနဲ့ မတူတာတော့ အားလုံးသိမယ်ထင်တယ်။ သူတို့ တွေဟာ သနားတတ်တယ်။ ကြင်နာတတ်တယ်။ ကြောက်တတ်တယ်။ မိန်းခလေးတွေကို သနားအောင်ပြောတတ် နေတတ်တဲ့ ဘဲ တွေဟာ အများအားဖြင့် ကြွေ သွားလေ့ရှိတယ်။ ရည်းစားထားတဲ့အခါတိုင်း မိန်းခလေးကို သွားပြီး ဟဲ့…ကောင်မ ငါ့ကို ချစ်စမ်းပါဆိုရင် ဘယ်သူမှ ချစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဘဲ တွေက ချစ်စကား ဆိုရင် အနဲဆုံး ဒီလိုပြောတတ်ရတယ်။
အသက်ကြီးတဲ့ မိန်းခလေးကို ငယ်တဲ့သူက ချစ်ရေးဆိုရင်…မ…ရယ်…မ..ကိုလေ တနေ့ မှ မေ့လို့ မရဘူး။ အရမ်းချစ်တယ်ကွယ်…ဘာညာဆိုပြီး ရွှီးကြည့်။ အနဲဆုံးတော့ အဲဒိ့စော်…မပျော်ရင် ကျနော့်ကို ကြိုက်သလိုသာပြော။
ကျနော့်ရဲ့ အတွေးက အန်တီပဲခေါ်ခေါ် အဒေါ်ပဲပြောပြော “တီဒေါ်စု” ယနေ့ မှာ လွှတ်တော်တွင်းကို ဝင်တာ သူ့ စရိုက်နဲ့ ပိုပြီး လက်တွေ့ ဆန်တယ်။ ဟန်ကြတယ်။ ဒါမှ သူ့ ရဲ့ တော်ကီတွေနဲ့ နွဲ့ လိုက်ရင် စစ်သားတွေ အကုန်လုံး ကြွေသွားနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံး မိန်းခလေးက တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချူပ်ရင် အကြင်နာတွေများတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးပိုရနိုင်တယ်။ မိန်းခလေးက ကျားတွေထက် ပိုပြီး စေ့စပ်တယ်။ စီမံခန့် ခွဲမှုမှာ စိတ်ရှည်တယ်။ ကျားတွေလို အနည်းဆုံး အရက်မှုးပြီး စောက်ရမ်းမလုပ်ဘူး။ ဥပမာ မြန်မာအိမ်ထောင်စုတိုင်းမှာ မိန်းခလေးတွေက ငွေကိုင်တယ်။ အိမ်ထောင်ကိုထိန်းသိမ်းတယ်။ ကျားတွေက အရက်ဆိုင်နဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ အချိန်ကုန်တယ်။ ဒါတွေကိုလေ့လာပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်တော့ အန်တီစု ဟာ လွှတ်တော်နဲ့ တန်တယ်။ အာဏာရှိတာက ပိုကောင်းတယ်။ အာဏာမမက်ဘူးဘာညာမပြောနဲ့ ။ လူတိုင်းမက်တယ်။ ယူလည်းယူသင့်တယ်။
ကဖုတ်ကျော် ရှင်ဟာလေ … တကယ့်ကို ဂွစာပဲ ။ နာမည်ပြောင်းပါတော့လား ဟေ … ။
အဟုတ်ကြီးမှတ်လို့ အဖျား ရှူးတာ ချည်းပဲ … ။ အမြဲတမ်း ချိန်ခွင်လျာလို တစ်ခြမ်းစောင်းနေတယ် …. ။ မိန်းမတွေကို ဒီလောက် နှိပ်ကွပ်ချင်မနေနဲ့ ….. \_ရှင့်ကိုမွေးထားတဲ့ အမေကလည်း မိန်းမဆိုတာ သတိရဦး အကြင်နာတွေ သိပ်ရှိတိုင်း လွှတ်တော်တက်ဖို့ အဆင့်မှီတာမဟုတ်ဘူး …. ။ ဘယ်လို အရည်ချင်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးမို့ တက်လို့ ရတာ လူတိုင်းသိတယ် … ။
စောက်တလွဲအများကြီးထဲ ရှင်လည်း တစ်ယောက်အပါဝင်ဆိုတာ သတိရပါဦး … ။ ဒီလို ပိုင်ပိုင်စီးစီးလေသံနဲ့ ဗေဒင်ဆရာလုပ်စားသင့်တာ … စောက်တလွဲဖြစ်ပြီး ဒီရောက်လာတာမို့လား ။
ဟိုးရက်တွေက ဘိုင်နိမ်းတက်ပြီး ရန်စထားတဲ့ပို့စ်တွေ့တယ်နော် … လွန်လွန်ကဲကဲတွေ ဖြစ်မလာနဲ့ … ။ အဲ့နေ့က လော့အင်မလုပ်ပဲ ဒိုတာ ခုတ်နေလို့ လက်ရှောင်လိုက်တယ် … သိပ်ပြီး လွန်ကျူးမလာနဲ့ … ။ ရွံစရာကောင်းတယ် ။ :mad:
မိန်းမတွေဟာ ရန်တွေ့ တာလည်း ဝါသနာပါတယ်။ စိတ်လျှော့ပါ မမလေးရာ။ စိတ်ကြီးပဲ။
အမယ်… စကားတွေ ဘာတွေ ပြန်ပြော တတ်နေပြီကိုး…
ဒီလိုလေးလဲ လုပ်ဇမ်းဘာ …
နေရာတကာ တေမိ လုပ်တာ တိုင်း မကောင်းဘူးနော်…
ကိုယ်ယိုတဲ့ ချီး ကိုယ် ပြန်ကျုံးရသတဲ့…
ကြည့်ရတာ ကိုယ့်လူလဲ စိတ်ဆိုးခဲ တဲ့ သူစားမျိုး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်….
စိတ်ထဲရှိတာရေးချင်သလိုရေး.. လာ အဆဲခံထိတော့လဲ အေးဆေး…
ဘယ်လိုမှပြင်မရတဲ့ လူကို အတင်းပြင်ခိုင်းနေရင် ကိုယ်ဘဲမောရုံကလွဲလို ဘာအကျိုးမှမရှိတာ skip
ခင်ဗျားကတော့ ထမင်းဝနေတဲ့ လူဆိုတော့.ပါးဖောင်းဖောင်းကြီးနဲ့ ပြောပြီပေါ့လေ..
စကားပုံလေး တခုတောင်သတိ၇ မိသေး..
နောက်တခုက အန်တီစုက လမင်းလို လူစားမို့ ခင်ဗျားက ဘယ်လောက်ပဲ အော်အော်.ဟိုကအေးဆေးဗျ.
ကျုပ်တို့လဲ အေးဆေး..မအေးဆေးနိုင်တဲ့ ခင်ဗျားသာ..လမင်းကို မနာလိုဖြစ်ရင်း..အာညောင်းအောင် အော်ရင်း..
ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ တစ်မျိုးကြီး မဟုတ်သလိုလိုနဲ့ တစ်မျိုးဂျီးဗျန်ဘဲ
( ဒါ့အပြင် အရမ်းကို ရက်စက်တဲ့ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေရဲ့ သေနတ်ကို အာခံပြီး အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့
သူဟာလည်း အမှန်မှန်ဆို ကျားပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ )
ပြောနေကြတဲ့ အဖွားကြီးလွှတ်တော်ထည်း မဝင်တော့လည်း အော်ကြတယ်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကတော့ အဲ့သည်အော်နေတဲ့ကောင်တွေကို လီးဘဲလို့ ဦးစွာပထမ ဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်
လက်တွေ့ရင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ အဖွားကြီးကို ဖင်ယားပြီးအော်ပြရင်တော့ကျုပ်က လက်မခံခြင်ဘူး
ဒါ့ကြောင့် ကျုပ်တို့က သူ့ကို အကြံပေးတာတို့ တိုက်တွန်းတာတို့ ဒါတွေကိုဘဲလုပ်သင့်တယ်
အထူးလုပ်သင့်တာက အင်တိုက်အားတိုက် ထောက်ခံသင့်တယ်
မဲဝိုင်းထည့်တာလဲအင်တိုက်အားတိုက်ပါဘဲ ဒါပေသိ သူမက မျက်နှာခြင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့
စစ်တလင်းမှာ ဆိုခဲ့ပြီသလို ဘေးကျပ်နံကျပ် အကျပ်တည်းတွေကို မြင်နေတွေ့နေရတဲ့အတွက်
သူမရဲ့ တုန့်ဆိုင်းနေတာတွေ ရပ်ဆိုင်းနေတာတွေကိုလည်း ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်
ကျုပ်တို့ ထပ်ပြီးတော့ အားပေးသင့်တယ် ( သူစဉ်းစားနေတယ် သုံးသပ်နေတယ် )
ကြိုမတွက်ထားဘူးလား ဘာလား ဆိုတာကတော့ လီးဘဲပေါ့ကွာ
မော်တော်ကား ထရပ်ဖစ် ဖြစ်နေတဲ့အခါ အနောက်ကကောင်တွေက ကိုယ်သွားမရလို့
ဟွန်းဘဲ နင်းဂန်တီးနေပြီးတော အရှေ့မှာ ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးဆိုတဲ့သဘောလေး
( ပြည်သူတွေအမှတ်ပေးအောင်လုပ်ရမယ် ) ဆိုတဲ့စကားလေး သိပ်လှတယ်နော
ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူတွေအမှတ်ပေးအောင်လုပ်ဘို့ဆိုတာက သူ့ခမျာ
အစပထမကတည်းက ခြေမှုန်းခံထားရတယ်ဆိုလေး သတိချပ်ကြဘို့ပါ
( သူမ ဘာမှလုပ်ခွင့်မရသေးပါဘူး )
သူမလုပ်ခွင့်ရဘို့ ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အော်နေကြကတည်းက
၇ှိပါသေးတယ် ဗိုလ်ချုပ်သမီးဆိုပြီး လူထုထောက်ခံလို့ပါကွာဘာမှအဖြစ်မရှိပါဘူးဆိုတာလည်းပြောကြတာပါဘဲ
( အထူးဆိုလိုခြင်တာက ယနေ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုပါဘဲ တစ်ခုသောအနိုင်ရပါတီဟာ
ပြည်သူတွေလက်မခံရင် အာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ခွင့်မရအောင် လုပ်ခွင့်ရတဲ့သဘောလေးပါ
ဒီအဖွားကြီးကို ကောင်းသည်ဆိုးသည် အသာထား ဒီအဖွားကြီးပါတီက အနိုင်ရမှ
အဲ့သည် ပြည်သူမကြိုက်တဲ့အစိုးရကို ပြည်သူတွေပြန်လည်ဖြုတ်ချလို့ရတဲ့စနစ်ကြီး
ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လွယ်လွယ်လေးမတွေးကြဘဲ လီးလိုလိုမှိုလိုလို
ဟိုလိုဖြစ်သင့်တာနဲ့ ဒီလိုဖြစ်သင့်တာနဲ့ ကိုယ့်လည်းဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူး အော်နေကြပေါ့ကွာ )
ဒါ့ကြောင့်ကျုပ်တို့ဟာ ဒီအဖွားကြီးကို မဲပေးရုံလောက်တင်မဟုတ်ဘူး
ဒီအချိန်မှာ လူထုစည်းဝေးပွဲကြီးတွေလုပ်ပြီးကို ထပ်ပြီးထောက်ခံရမှာ
ဒီအဖွားကြီးပါတီ အနိုင်ရမှ နောင်ဆိုရင် ပြည်သူလက်မခံတဲ့ကောင်တွေ ကြာကြာအစိုးရလုပ်လို့
မရတဲ့ စနစ်ကြီးပပျောက်မှာဆိုတာလေး ခပ်ပါးပါးတွေးပြီး
အဲ့သည်အဖွားကြီးပါတီ တရားဝင်အစိုးရဖြစ်လာလို့ စောက်သုံးမကျတဲ့အခါကျမှ
ဘပု ကို စိမ်းသွားပါဂျောင်း….
ကျနော်ပြောတာကို ခင်ဗျားနားမလည်ဘူးထင်တယ်။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ လွှတ်တော်တွင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ ပိုသင့်တော်တယ်။ သူက သမ္မတတောင်ဖြစ်သင့်တယ်။ မိန်းခလေးတွေက အုပ်ချူပ်တာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ်။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ကတော့ ယောကျာ်းနဲ့ ပိုသင့်တော်တယ်။ မြန်မာပြည်က စစ်ဗိုလ်ချူပ်တွေက အရမ်းရက်စတ်တာကို တရားရေအေးတိုက်ကျွေးလို့ မရဘူးလေဗျာ။ ခင်ဗျားက စာကို ကောင်းကောင်းဖတ်တက်ပုံမရဘူး။
မရဆို ခုနစ်တန်းတောင်မအောင်ဘူးလို့တော့ ပြောတာဘဲ
အဲ့သည်လူကို ကျုပ်ကိုယ်တိုင် အနီပေးလိုက်ပြီ
ရှင့်ကို ကျွှန်မ ကိုယ်တိုင်နီလိုက်တယ်
ဖစ်တင့်ဒယ် … အော်လာတာ ဘယ်နနှစ်ရှိပီလဲကွယ်…
ဟုတ်တယ်ဗျာ။ အခုတလော ကိုယ်တိုင်လဲဘာမှစောက်ဖြစ်ရှိအောင်မလုပ်နိုင်ပဲ ဒေါ်စုကို လိုက်ဝေဖန်နေတဲ့ ကောင်တွေရဲ့စာတွေဖတ်ဖတ်နေရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒေါက်တာ လွမ်းဆွေဆိုတဲ ငနဲ အရက်ကြောင်ကြောင်ပြီး သူ့ဘလော့မှာ ရေးထားတာတွေ စိတ်ပြက်ဖိုကောင်းလောက်အောင်တွေ နေရတယ်။
ဒေါက်တာ လွမ်းဆွေလိုလူမျိူးတွေက နိုင်ငံရေးခုတုံးလုပ်ပြီးကိုယ်ကျိုးရှာနေကြတဲ့သူတွေလေ။ အခုအမေစုကငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်တော့စားပေါက်ပိတ်သွားတော့ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေတာပေါ့။ မဆန်းပါဘူး။ အမေစုကအတိုက်အခံအနေနဲ့ဆက်ရှိမှသူတို့စားပေါက်ချောင်မှာကိုး။ တိုင်းပြည် အပေါ်စေတနာတကယ်ရှိလို့နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာမှမဟုတ်တာ။ အရင်ကအမေစု ကိုသူ့ တို့လောက်ချစ်တာမရှိတော့ဘူး။ အခုကတော့သူတို့လောက်မုန်းတာမရှိတော့ ဘူး။ ဖြစ်နိုင် ရင်သူတို့ကအမေစုကိုထောင်ထဲမှာပဲဆက်ရှိစေချင်နေကြတာ။
ကိုဖုန်းကျော် မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး အတိုက်အခံပါတီလုပ်ပါလား။
ဘာမှတော့ မထောက်ခံဘူး။ခင်များပြောတာထဲက ဒါတော့ ကြိုက်သဗျ။
ရွာထဲမှာ ခင်များလို ပြန်မပြော၊ဘေးထိုင်ကြည့် တစ်ကောင်ေါ်နေတယ်ဗျ။
ဥပမာ မောင်လွဏ်းဆွေ ကိုပဲ ကြည့်ကြည့်။ ကိုတာကိုလည်းထပ်ကြည့်အုံး။
နေရာတိုင်းလိုလိုပဲ။ စစ်သားကလည်း စစ်သားမလုပ်ပဲ ဖင်ယားပြီး လွှတ်တော်တက်တော့
ဘာသုံးရလဲ။ ဘာမှ သုံးရမရတဲ့အပြင် လွှတ်တော်ထဲမှာ အိပ်ငိုက်ပြီး ပါးစပ်က သားရည်
တွေကထွက်၊ အာပုတ်နံ့ က တထောင်းထောင်းနဲ့ အခြားသူတွေကိုတောင် ထိခိုက်သေးတယ်
မဟုတ်လား။ အချိန်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ အမှန်မှန်ဆို လူတွေအားလုံးက ကိုယ့်အလုပ်ကို
ကိုယ်လုပ်ရမှာ။ အခုတော့ စောက်တလွဲတွေက နေရာတကာပဲ။